Serivisy Antso an'i Amazon, avereno indray ny kaontinao izao
Ireo mpamatsy tolotra antso ambony kaonty Amazon tsara indrindra
Nisy fiovana mahery vaika teo amin'ny tontolon'ny e-varotra. Na izany aza, ireo izay nanomboka ny voalohany dia mbola mahazo tombony amin'ny varotra masaka. Amazon dia iray amin'ireo sehatra nanentanana ny fiantsenana an-tserasera. Serivisy natombok'i Jeff Bezos nanomboka nivarotra boky tamin'ny voalohany. Ary, avy eo dia raisin'ireo mpivarotra hafa koa. Nanjary tsena malalaka ho an'ireo olona mivarotra vokatra samihafa amin'ny sokajy samihafa.
Raha mamakafaka an'i Amazon ianao dia hahatsapa fa toy ny motera fikarohana ny vokatra izany. Izy io dia saika misy karazana gadget na vokatra azo eritreretina. Amazon dia toerana iray ho an'ny zavatra rehetra. Na izany aza, ny ankamaroan'ny mpivarotra mifandraika amin'ilay sehatra no nahatratrarana izany. Vitsy dia vitsy ny olona avy amin'ny lafin'ny mpanjifa mahalala momba an'io. Saingy, raha mpivarotra ianao dia fantatrao ny habetsahan'ny fifaninanana misy izao.
Ary, miaraka amin'izay zava-dehibe rehetra mitranga, ny olona sasany maniry ny hijinja ny tombony dieny izao. Ny mpanjifa sasany dia nanandrana nanararaotra ny lampihazo sy ny mpivarotra izay maniry ny hahatratra ny varotra bebe kokoa ao anatin'ny fotoana fohy. Izany dia nahatonga an'i Amazon hametraka lalàna sy fitsipika mifehy ny mpanjifany ary koa ny mpivarotra. Saingy, ny lafiny mpivarotra no mihantona matetika satria mpanao kalitao izy ireo. Ary, raha tsy mahavita izany izy ireo na manandrana fomba hafa tsy ilaina dia tompon'andraikitra amin'ny fampiatoana ny kaontiny ny sehatra. Amin'ity toe-javatra ity dia afaka manao antso manokana ny olona iray fa tsara ny mitady serivisy fampiakarana fitsarana any Amazon. Fa maninona Satria ny vintana hananganana ny kaontinao ao anatin'ny fotoana fohy dia avo kokoa amin'ny voalohany.
Ankehitriny mba hahalala bebe kokoa momba ny serivisy fampiakarana fitsarana any Amazon sy ny fampiatoana ny kaonty mpivarotra dia vakio etsy ambany
Vakio ihany koa: Mahomby ve ny Amazon Appeal Services amin'ny 2021?
Azoko atao ve ny mamerina ny kaontiko mpivarotra raha tsy misy serivisy fampiantsoana an'i Amazon?
Ity dia iray amin'ireo fanontaniana mahazatra indrindra apetraka amin'ny fiarahamonina mpivarotra Amazon. Ireo olona manome serivisy amin'ny alàlan'ny serivisy fampiantsoana any Amazon, dia olona toa ahy sy ianao. Tsy ny hoe mahavita azy ianao fa ny fahombiazany. Serivisy any amin'ny fitsarana ambony any Amazon izahay ary fantatray fa tsy siansa rocket izany. Na izany aza, ny mahomby sy marina dia zavatra iray tokony hikarakara anao. Voalohany, Amazon dia nanome torolàlana momba ny fomba fitarainana. Ary, raha matoky tena ianao dia mandrosoa.
Saingy, mamporisika anao izahay hahatakatra ny olana eo am-pelatanany aloha. Manoratra an Taratasy fampiakarana an'i Amazon Tsy sarotra fa mila mahatakatra ny olana ianao ary manamboatra vahaolana ilaina hiatrehana izany. Ny tsara indrindra, rehefa mampiato ny kaonty mpivarotra i Amazon, dia mandefa fampandrenesana ho an'ny mpivarotra izy ireo. Amin'ity fampandrenesana ity dia lazain'izy ireo ny antony nampiatoana ny kaonty. Raha azonao izany dia miezaha manamboatra taratasy milaza amin'i Amazon ny fomba hamahanao ity olana ity. Ary, tokony ho marina sy azonao ny olana. Ary farany fa tsy ny kely indrindra, aza mikoropaka.
Ary, raha maniry hivoaka ivelany fotsiny ianao dia afaka manakarama serivisy fampiantsoana an'i Amazon. Azoko atao ny manome toky anao fa mendrika ny fampiasam-bolanao indrindra rehefa very orinasa isan'andro ianao mandritra ny fampiatoana.
Antony ao ambadiky ny fampiatoana ny kaonty Amazon Seller
Miaraka amin'ny isan'ny vokatra mihamitombo eo amin'ny lampihazo, dia mitombo koa ny isan'ny antony mety hampiatoana ny olona. Fa maninona Satria misy fomba mihoatra ny iray ny mpivarotra tsy manitsakitsaka. Ary, miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina marobe toy izany, dia hentitra ny tokony hisian'ny lisitra fa tsy teboka vitsivitsy fotsiny. Noho izany etsy ambany dia efa nanonona antony vitsivitsy tena mahazatra ao ambadiky ny fampiatoana ny mpivarotra Amazon izahay:
Kaonty marobe: Raha manana kaonty mpivarotra marobe amin'ny Amazon ianao dia mety hisy fampiatoana anao. Amazon dia mamela kaonty mpivarotra iray isaky ny olona. Ny algorithm AI dia afaka manamarina ny mari-pankasitrahanao. Ary, raha mifanaraka amin'ny kaonty iray hafa izy dia mety hahazo fitokonana fampiatoana ny asa iray ary mety hitaky serivisy fampiakarana fitsarana any Amazon.
Lisitra tsy mety: Araka ny torolàlana nomen'i Amazon, misy vokatra sasany izay tsy azon'ny olona amidy eny amin'ny lampihazo. Mety ho an'ny firenena na voararan'ny Amazon tsotra izao, manerana ny sehatra. Ohatra, any India dia voarara ny fivarotana kilalao an'ny olon-dehibe ka tsy misy mahazo mivarotra izany. Ary, raha tratra ianao mivarotra azy ireo amin'ny Amazon dia hahazo fampiatoana fampiatoana ny kaontinao.
Doka amin'ny tranokalanao: Amazon dia hamela ny fivarotana vokatra samihafa avy amin'ny marika samihafa manana ny tranonkalany. Saingy, tsy mamela azy ireo hanao doka amin'ny sehatra e-varotra izy ireo. Raha manao izany ianao dia mety mila serivisy fampiantsoana any Amazon.
Lisitry ny entana tsy mitombina: Raha ny mpanjifa dia mitanisa ny vokatrao ho tsy marina dia mety hiato ny kaontinao. Betsaka ny lisitra ao amin'ny Amazon izay milaza fa marina fa tsy izany. Raha izany no zava-misy amin'ny vokatrao dia atoro anao aho mba tsy hivarotra azy intsony.
Lisitry ny entana sandoka: Ity dia tsy misy dikany, fivarotana zavatra sandoka dia tsy ara-dalàna. Amazon dia toa mahatoky tena amin'ny vokatra rehetra izay voatanisa eo amin'ny lampihazo. Raha olona mivarotra zavatra izay heverinao fa sandoka ianao dia mahazo angona ilaina momba ilay vokatra. Ary, raha azo atao, atsaharo ny fivarotana mandra-pahazoanao mazava.
Fitarainana momba ny fiarovana: Amazon dia tena eo amin'ny resaka resaka fitsipiky ny fiarovana. Raha manimba izany ny vokatrao, dia alao antoka fa manamboatra azy ianao na mijanona tsy mivarotra azy fotsiny.
Sary voafetra: Betsaka ny karazany raha ny sary voafetra no resahina. Raha nametraka sary toa tsy mety amin'ny sehatra ianao dia esory. Ary koa, tsy mahazo mampiasa ny sarin'ny vokarin'ny olon-kafa ny olona. Ity no iray amin'ireo antony mahazatra indrindra ao ambadiky ny fampiatoan'ny mpivarotra. Betsaka ny fangatahana voarainay momba ity tranga iray ity. Matetika ny mpivarotra dia mampiasa sary izay tsy ananany alalana. Raha manao izany ianao dia mijanona, midika izany fa manitsakitsaka ny politika IP ianao ary mila serivisy fampiantsoana any Amazon.
Namidy entana efa niasa: Amazon dia mamela ny fivarotana entana efa niasa fa amin'ny sokajy nohavaozina. Raha mivarotra zavatra efa niasa ho vaovao ianao dia ny famerenan'ny mpanjifa ratsy dia mety hitondra anao any am-pijanonana. Sorohy izany ary alao antoka fa ny rivotra rehetra amidinao dia madio toy ny tsio-drivotra.
Entana lany daty: Amazon koa dia misy trano mora simba. Amazon dia matetika fantatra amin'ny gadget fa mivarotra vokatra maro hafa koa. Raha mivarotra vokatra efa lany daty ianao dia mety ho saina mena lehibe. Tsy maintsy mitazona ny fanamarinana ireo vokatra hatolotrao ianao. Hamarino tsara fa mihevitra an'i Amazon ho orinasa ara-dalàna ianao. Azo atao ny mamerina amin'ny laoniny fa ny hetsika toy izany dia manasarotra ny asa ho an'ny serivisy fampiantsoana any Amazon koa.
Zavatra tsy amidy araka ny voalaza: Ny famaritana ny vokatra dia olana lehibe kokoa. Mazava ho azy fa mila miady amin'ny fifaninanana henjana ny olona. Saingy, tsy misy antony tokony hahitanao ny hitsin-dàlana rehefa mankahala azy fatratra ilay sehatra. Betsaka ny mpivarotra no mamaritra ny fahaizan'ny vokatra be loatra noho ny tokony ho izy. Raha mahazo valiny ratsy ianao amin'izany dia hadisoanao tanteraka izany. Ny famaritana dia natao hanehoana ny vokatrao amin'ny fomba marina sy marina indrindra. Ary matokia ahy, io no fomba hananana traikefa ara-barotra milamina eo amin'ny lampihazo. Noho izany, raha tsy tianao ny manakarama serivisy fampiakarana fitsarana any Amazon ho an'ny famerenana amin'ny laoniny dia alaviro izany amin'ny vola rehetra.
Taham-pitsaboana avo lenta: ODR na Order Defect Rate dia ny isan-jaton'ny kaomandy tsy mety alefanao. Fandikan-dalàna lehibe eo imason'ny sehatra io. Ny tsara indrindra dia mamela ODR tsy mihoatra ny 1% fotsiny i Amazon. Noho izany, raha misy fitarainana momba ny vokatra tsy mandeha dia alao antoka fa manamboatra azy alohan'ny fotoana ianao.
Fanandraman'ny mpanjifa ratsy (NCX): Ny fanadihadian'ny mpanjifa dia fitaratry ny karazana serivisy omenao ny mpanjifanao. Raha tsy mitsahatra mahazo hevitra ratsy ianao dia diso ny vokatra. Raha izany no mitranga aminao dia mandraisa andraikitra avy hatrany. Raha ny tokony ho izy, amin'ny maha sampan-draharaha manao antso amin'ny fitsarana any Amazon, dia mangataka amin'ny mpanjifanay izahay mba hanao toy izany koa. Mora kokoa ny manova izay amidinao noho ny mamoy ny kaonty mpivarotra anao.
Ka izany no sasany amin'ny antony mahazatra indrindra aorian'ny fampiatoan'ny mpivarotra azy. Raha miahiahy ianao fa mety hanimba olona ao aminy ny kaontinao dia zahao fa ASAP. Ankoatr'izay, matetika dia misy fotoana fampiatoana ny kaonty noho ny antony maro. Mety ho sarotra ny manamboatra azy io fa ataovy izay hahavitana azy araka izay azo atao. Ary miasà amin'izany ASAP, avelao izy hanamboatra ny ho avy mety hitokona anao. Izany dia nitranga tamin'ny sasany tamin'ireo mpanjifanay taloha ary mety hitranga aminao koa izany.
Naato ny kaonty? Antsoy izahay izao!
Ahoana ny fomba hanampian'ny serivisy fitarainana anao?
Rehefa miresaka momba ny serivisy fampiakarana fitsarana any Amazon, ny taratasy fampakarana dia mitana andraikitra lehibe amin'izany. Taratasy fampiakarana Amazon no fifandraisana tokana misy eo aminao sy i Amazon izay afaka mamerina ny kaontinao. Raha tsy miantsona amin'ny lala-mahitsy izy dia mety maharitra elaela. Amin'ny ankapobeny, izany no antony mahatonga ny olona maro manakarama Serivisy Antso any Amazon. Araka ny voalaza teo aloha, dia mora kokoa ny mamerina ny kaontinao amin'ny andrana voalohany. Raha tsy izany dia mety handany fotoana be dia be ary mety hiafara amin'ny famoizana orinasa be dia be.
Raha izao, raha miresaka bebe kokoa momba an'io raharaha io isika, dia taratasy fampakarana any Amazon no lovia lehibe indrindra fa ny tena fotony dia ny Plan of Action. Ny drafi-pandaminana dia ny dingana mety horaisinay hamahana ilay olana nampandrenesin'i Amazon. Mba hanaovana izany dia misy zavatra roa izay dinihintsika:
Vakio tsara ny fampandrenesana nalefan'i Amazon.
Makà hevitra mazava momba ny olana efa akaiky sy ny fanitsakitsahana ny kaontinao.
Mamorona ny dingana ilaina ankehitriny, ny fomba fanamboaranao azy ireo.
Izy io dia be pitsiny kokoa noho io fa ireo dingana ireo no fangaro fototra. Ary koa, ny famerenana amin'ny laoniny dia tsy manam-paharoa, noho izany, nanjary zava-dehibe ny fitandremana ny tsirairay amin'ny famerenana azy amin'ny fomba hafa. Na izany aza, ny zavatra niainantsika tamin'ireto dia manamora anay hatrany amin'ny fikirakirana ny fangatahana rehetra.
Jereo ny serivisy fampiakarana fampiatoana anay Amazon
Rehefa vita ny famoronana drafi-pikasana ho an'ny fangatahana iray manokana dia miroso amin'ny fanoratana taratasy fampakarana any Amazon izahay. Izy io dia toy ny litera hafa nefa tsy mitovy kely. Ny tanjona dia ny hiteny faran'izay betsaka araka izay azo atao. Ary eo amboniny dia ataovy voalamina kely. Noho izany, eto ambany ny sasany amin'ireo fomba fanao arahinay:
Fohy sy mazava: Araka ny voalaza tetsy ambony, "Mitenena bebe kokoa amin'ny teny vitsy kokoa". Betsaka ny fitarainana azon'i Amazon isan'andro. Noho izany dia lasa zava-dehibe ny filazantsika amin'ny fomba mora rehetra ny zava-drehetra. Ary miezaha hanao izay fohy kely hahafahan'ny solontena mamaky mora foana.
Drafitr'asa: Koa satria efa nahita drafitra asa isika, fotoana izao hanazavana azy tsara. Miezaka mampiasa teboka bala izahay mba hampitomboana ny fahombiazany amin'ny resaka scanning ilay taratasy. Ary ambonin'izany, ny teboka rehetra dia famantarana mazava ny dingana hataontsika.
Structure: Ny atiny voasoratra rehetra dia sombin-tantara iray misy fitantarana. Izahay dia milaza an'io satria zava-dehibe ny fitantarana. Hamarininay tsara fa hotononinay araka ny filaharany ny zava-drehetra ary raisinay tsirairay ny tsirairay amin'ireo olana manazava ny fomba hikarakarana azy.
Intonation: Zava-dehibe ny hitazomana ny feon'ny litera. Tokony ho takatra fa ny fahafaha-mivarotra amin'ny Amazon dia fotoana iray mety. Raha mitazona izany eritreritra izany dia voaorina ny taratasy iray manontolo. Zava-dehibe ny mahatakatra fa ireo fitsipika sy fitsipika ireo dia natao ho an'ny mpivarotra ihany ao anatin'ny fotoana maharitra. Raha olona miasa mafy am-po ianao manandrana miaina tsara ny fomba fiainanao dia ho azonao ny antony mahatonga izany.
Amin'ny maha serivisy fampiakarana raharaha any Amazon anay, dia raisinay ho zava-dehibe tokoa ny fananganana ilay antso. Iray amin'ireo adidintsika ifotony io ary raisinay manokana izany.
Fotoana mety amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny kaonty mpivarotra
Tsy misy miavaka amin'ny fotoana. Araka ny voalaza teo alohan'ny famerenana amin'ny laoniny rehetra dia miavaka amin'ny heviny manokana. Hitanay ny fotoana namerenan'ireo taratasinay nampakatra ny kaonty tao anatin'ny 24 ora. Na izany aza, raha misy client tonga aty aminay mangingina manandrana taratasy hamerenana amin'ny laoniny, mety maharitra elaela ny famerenana. Miaraka amin'ny fampiakarana an'i Amazon, ny fanintona voalohany, noho izany, alao antoka fa ny taratasy fiangaviana amazona dia ampy ho an'ny voalohany.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fampiatoana ny kaonty amin'ny ho avy?
Misy fomba roa ahafahan'ny olona manao izany. Ny voalohany dia tokony ho mavitrika momba ny tsirairay sy ny zava-drehetra. Ny faharoa dia ny manakarama serivisy fampiakarana fitsarana any Amazon. Betsaka ny serivisy misy anay izay manome fisorohana ny fampiatoana. Tsy misy isalasalana fa mety hanelingelina ny fikirakirana andraikitra maro indray miaraka. Izany no antony mahatonga ny mpivarotra maro hamoaka amin'ny laoniny ny fikojakojana ny fahasalaman'ny kaonty mpivarotra azy ireo amin'ny serivisy fampiakarana an'i Amazon.
Raha olona mitady serivisy fampakarana any Amazon ianao dia mety afaka manampy izahay. Manolotra serivisy toa ny fisorohana ny fampiatoana ny mpivarotra izahay, fizahana ara-pahasalamana ara-pahasalamana tsy tapaka ary fampisondrotana ny varotra. Noho izany, raha liana ianao dia makà ny fakana hevitra maimaim-poana amin'ny manindry eto.
Mandefasa hafatra ho anay
Tianay ny mandre avy aminao!